Moscow Technical University of Communications and Ngolwazi
Musa ukulibala ukuba discuss Moscow Technical University of Communications and Informatics
Ngomhla we-11 kweyoMdumba, 2011 le Moscow Technical University of Communications and Ngolwazi (MTUCI) yabhiyozela iminyaka 90.
Phakathi kweminye amawaka abafundi bayo kukho kakuhle- izazinzulu ezaziwayo kunye neengcali, karhulumente kunye noluntu amanani ezibalaseleyo eRashiya kumazwe amaninzi Asia, iAfrika, EYurophu Latin America.
Namhlanje MTUCI lelona ziko likhulu lemfundo kwaye zenzululwazi lokulungiselela nokuxhotyiswa ngoqeqesho lweengcali abanezakhono kakhulu endle ngomnxeba, Zenzululwazi, zobunjineli radio, Ezoqoqosho kunye nolawulo.
Ubume kwiYunivesithi kugubungela kwamasebe amabini ommandla emizini Rostov-on-le Don and Nizhniy Novgorod, Scientific Center Research, Advanced Telecommunications Training Center, College of ngeengcingo, Pre- emfundo Preparatory Center, Scientific- Educational Uluhlu Techniques New, Technical Library Scientific. Ezisibhozo Kumaziko Uqeqesho kulungiso leengcali zobugcisa Russian owenziweyo yi MTUCI kunye zehlabathi ezikhokelela iinkampani ngomnxeba basebenza. Phezu kwesiseko MTUCI ibe Technopark ukusebenza ngokwenene zenziwe abaninzi nxaxheba kwiinkampani ezahlukeneyo kunye nemibutho ngocingo kubuchwepheshe ulwazi nqanaba wadalwa.
IYunivesithi usingisa leMfundo- Association umgaqo kwezemfundo endle ngomnxeba, equka ngaphezulu kwama 80 namaziko aphezulu emfundo eRashiya namazwe CIS.
Abasebenzi imfundiso MTUCI imalunga 700 abantu. Phakathi kwazo kukho phezu 100 oonjingalwazi kunye ngaphezu 400 abaviwa Sciences kunye nabahlohli abaphezulu. Phakathi oonjingalwazi kwiYunivesithi kukho amalungu zizele kunye ne ye iinkqubo yaseRashiya ngamazwe, abaphumelele noLenin amabhaso State, Amabhaso nguRhulumente Russian Federation.
About fourteen thousand students of full time and correspondence education, abafundi post-graduate kunye abahambeli lwezifundo ezahlukeneyo bafunda kwiYunivesithi. Imfundo yenziwa ngokwe inkqubo yanamhlanje emfundo multilevel: yezidanga, injineli, inkosi 25 ezenziwa kunye 8 imiyalelo. Iindlela kunye neendlela zoqeqesho ngokwesiseko kwimpumelelo zakutshanje endle ngeengcingo kunye nobuchwepheshe bolwazi zisetyenziswa kwi MTUCI. Ingcamango “kwiyunivesithi electronic »ngokuvumela “ukuba electronize” zonke iinkqubo zokuchonga, ukwamkelwa, uqeqesho kunye nokuvavanywa bafundi baqonda. Ngonyaka ngaphezulu 1000 abafundi kunye nabafundi post-graduate ukuthatha inxaxheba kumsebenzi yezenzululwazi entsimini iiteknoloji ezintsha infocommunication phezu isiseko MTUCI Scientific Research Center .
Intsebenziswano yamazwe weYunivesithi sele ethatha phantse 70 kwiminyaka. Umfundi lokuqala amazwe beza kufunda MTUCI kwi 1946. Ukususela amawaka ngoko eziliqela iinkosi, zezidanga, iinjineli, abafumene ngaphezu 350 abaviwa Sciences 82 amazwe ziye zalungiselelwa. Ngokusekelwe izivumelwano ngqo intsebenziswano kunye 48 amaziko kunye 16 iinkampani ezivela 46 kumazwe angaphandle ikhutshwa phandle. IYunivesithi lilungu iCandelo loPhuhliso International Telecommunication Union (ITU) kwaye lidlala indima ebalulekileyo umsebenzi ITU kunye neminye imibutho ngamazwe ngomnxeba
Department of “Ezobuchwepheshe”
Uyafuna discuss Moscow Technical University of Communications and Informatics ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo